Monsoon campaign free umbrella gift FAQ – SUNNY eSTORE
Big Sale on Household Essentials
Thadingyut Hearty Heart Promotion
Monsoon campaign free umbrella gift FAQ
Monsoon campaign ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
SUNNY eSTORE မှ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ customer များအား လက်ဆောင်ပေးအပ်သည့် အရောင်းမြှင့်တင် ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၃၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက် မည်သည့်ပစ္စည်းမဆို ဝယ်ယူမှုများအတွက် ထီးတစ်ချောင်း လက်ဆောင်ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
What is Monsoon campaign?
It is an exciting free gift promotion from SUNNY eSTORE for Monsoon season.
Customers will be eligible for one umbrella gift for purchases of 30,000 Ks and above for any item.
Monsoon campaign ကာလသည် မည်မျှကြာမြင့်သနည်း။
Monsoon campaign သည် ဇွန်လ ၂၃ ရက်မှ စတင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် ထီးလက်ဆောင်ကျန်ရှိသ၍ ထီးလက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါသည်။
What is the campaign period for Monsoon campaign?
Monsoon campaign starts from June 23rd and lasts as long as free gift stock is available.
ဤအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်နိုင်သလဲ။
အခြားဖော်ပြချက်များ ရှိသည့်အခါများမှလွဲ၍ SUNNY eSTORE ၏ ဝယ်ယူသူအားလုံး Monsoon campaign အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
All SUNNY eSTORE’s customers are eligible to participate in Monsoon campaign, unless otherwise specified.
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် ထီးလက်ဆောင် ၁ ခုထက် ပိုမို ရယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဝယ်ယူလိုမှုများပြားပါက သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပမာဏအနည်းငယ်သာ ကျန်ပါက SUNNY eSTORE တွင် customer တစ်ဦးစီ ရယူနိုင်သည့် ထီးလက်ဆောင်ပမာဏကို ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် promotion ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုမှုကို တွေ့ရှိရပါက SUNNY eSTORE တွင် ထီးလက်ဆောင်များကို ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
How many times can I claim umbrella gift?
Users who make multiple eligible transactions can currently claim more than 1 umbrella gift. However in case of high demand or low stock, SUNNY eSTORE has the discretion to limit the maximum number of umbrella gifts for each customer. Also, if you are found to be misusing the promotion, SUNNY eSTORE has the right to withdraw the umbrella gifts.
COM.MM မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ website ပေါ်ရှိ ပစ္စည်းများအား တိုက်ရိုက်မှာယူခြင်းဖြင့် သင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer Service Hotline ဖြစ်သည့် ၀၉ ၈၉၁ ၇၄၉၄၈၉ ထံ ခေါ်ဆို၍ အမှာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook messenger chat မှာ ရေးသားပြီး မှာယူနိုင်ပါသည်။
You can participate by ordering the products directly on our website at SUNNY.COM.MM
Alternatively, you can also call our customer service hotline at 09 891 749489 between 7AM – 10PM to place your order, or simply drop usanote on our Facebook messenger chat before 10PM.
ဘယ်ပေးချေတဲ့နည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
‌သင်၏ဝယ်ယူမှုကို နည်းလမ်း ၂ မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် - (၁) KBZPay ကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ကုန်သည်ငွေစာရင်း (စာရင်းနံပါတ် - ၇၀၀၀၁၉၀၁) ထံ ငွေလွှဲပြီး ပေးချေနိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် (၂) သင့်တံခါးဝသို့ ပစ္စည်းများ ရောက်သည့်အခါတွင် Cash on Delivery ဖြင့် ပေးချေနိုင်ပါသည်။
KBZPay app မှတစ်ဆင့် သင် ပေးချေမှုပြုလုပ်ပြီးသည့်အခါတွင် Customer Service Hotline မှ တစ်ဆင့်၊ သို့မဟုတ် Facebook messenger ပေါ်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer Service Team ထံ ကျေးဇူးပြု၍ အသိပေးပါ။
You can make your purchase via two different methods: (i) by using KBZPay and transferring to our merchant account (account number: 70001901) or simply by using (ii) Cash on Delivery when the products arrive at your doorstep!
One you have madeapayment via KBZPay app, kindly send your payment notification to our customer service team through the customer service hotline or on Facebook messenger.
ဘယ်အချိန်မှာ ပစ္စည်းတွေကို ပို့ပေးမှာလဲ။
Flash Friday အစီအစဉ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းပို့သည့်မူဝါဒမှာ SUNNY eSTORE ၏ ပစ္စည်းပို့ သည့်မူဝါဒနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
Our delivery policy for Flash Fridays is consistent with SUNNY eSTORE’s delivery policies.
ကျွန်ုပ်၏အမှာအား ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပစ္စည်းပြန်လဲခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပြန်အမ်းယူခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါ သလား။
ပစ္စည်းတွင် မူလ/ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များ ရှိပါက ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီးသည့်အချိန်မှ ၃ ရက်အတွင်း SUNNY eSTORE Customer Service Team ထံ ကျေးဇူးပြု၍ အကြောင်းကြားပါ။ မည် သည့်ပစ္စည်းပြန်လဲမှုမဆိုအား ၁၄ ရက်အတွင်း အပြီးပြုလုပ်သွားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သည် များ၏ ပစ္စည်းပြန်လဲခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်သွားရန် လိုအပ်သောကြောင့် အချို့အခြေအနေများတွင် တူညီချင်မှတူညီမည်။
Can I cancel, exchange or refund my order?
Should there be any original / manufacturing defects with the product, please inform the SUNNY eSTORE customer service team within3days from the receipt of the product. Any exchange must be completed within 14 days. We also need to comply with the exchange policies of our merchants which may in some cases be different.
SUNNY eSTORE တွင် အသုံးပြုမှုအားလုံးကို အကျုံးဝင်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ကြည့်ရှုရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
Are there any other Terms & Conditions that apply?
Please click here to access the Terms & Conditions that apply to all usage on the SUNNY eSTORE.